Akekho ozokhumbula manje, ngokungazelelwe kuphakama ukuthi i-melon isithelo noma imifino? Ngetulu kwalokho, abanye bakholelwa ukuthi yena kanye nengane yakhe esondelene nayo iyamabherries. Ngakho kungakhathaliseki ukuthi lokhu kuyiqiniso ngempela, ake sizame ukuyihlola okwamanje.
Ukuze uphendule umbuzo onjalo othakazelisayo, kubalulekile ukuhambisa ingqondo engadini yemifino noma isitshalo se-melon futhi ukhumbule ukuthi ikhalenda ikhula kanjani, yiziphi izimpendulo zalo, yiziphi umndeni ongowakho.
Abanye abantu, ngemuva kokubona ugwebu lwe-melon kanye nekhukhamba okokuqala, bayomangala, ngoba bafana kakhulu. I-liana enjalo, kuye ngezinhlobonhlobo, isakaza amamitha ambalwa. Ngaphandle kwalesi sici jikelele, amaqabunga omabili amasiko nawo afana nawo. Zincane, zifakwe shayela. Yiqiniso, isibonelo, e-Uzbekistan, ama-melon amashidi ayoba amakhulu, kodwa ezindaweni zokugcina izithombo zaseMoscow zithobekile kakhulu. Futhi lokhu kuzosiza ukuphendula umbuzo othi: "I-Melon isithelo noma imifino?" Phela, ubukhulu obuncane beqabunga lobuhle obumnandi obenza ukuba kube lula ukubona ubuhlobo bakhe nekhukhamba. Kulo mpela bafana ngendlela efanayo, kodwa kunzima kakhulu embala nombala ongaphansi.
I-Melon isithelo noma imifino?
Labo abangazange bakhule noma babone ikhaloni bekhula, bangase bacabange ukuthi banekhwama lekhukhamba phambi kwabo. Ngemuva kokuthi izobonisa izimbali eziphuzi, kuyoba nzima ukukusho ukuthi ikhabe noma ikhukhamba i-liana. Phela, izimbali zokugcina zilingana nobukhulu obufanayo nombala. Akumangalisi ukuthi lokhu kudidanisa ngisho nezinyosi. Bafaka impova kokubili lezo zitshalo nezinye izitshalo, bephethe impova yabo kusukela embali kuya embali emilenzeni yabo. Ngakho-ke, ngezinye izikhathi izithelo zomqube ezikhula eduze kwekhukhamba, khumbula ukunambitheka kwalokhu okulandelayo.
Uhlelo lwempande kubameleli bobabili amasiko nalo lifanayo - akusilo olujulile kodwa lukhula ngobubanzi. Bobabili imifino ayithandi ukufakelwa kabusha, njengoba izimpande zalimala.
Konke okungenhla kusiza ukukhipha ukungabaza. Ukucabanga, i-melon yisithelo noma imifino, ungasho ngokuqiniseka ukuthi lokhu kuyimifino. Ngempela, ikhukhamba yilokho abayikho, futhi udadewabo onobuhle obumnandi angeke abe owezinye izigaba zezitshalo zezitshalo.
Sichitha inkolelo yokuthi i-melon iyimithi
Ngakho iyini i-melon - isithelo, imifino noma i-berry? Izithelo zesiju ngokuvamile zilingana hhayi izithelo kuphela, kodwa futhi amajikijolo. Lo mbono uvelaphi? Isizathu sokucabanga kwakuyi-watermelon. Ngesizathu esithile, abanye baqala ukubiza ngokuthi iberry elikhulu. Bathi i-watermelon iyathandeka kakhulu, ngakho akuyona imifino, kodwa ingaba yi-berry. Futhi zikhula emhlabathini, hhayi emithini. Yebo, ama-strawberries, ama-cranberries kanye nabanye ahlala ezingeni lomhlabathi. Noma kunjalo, abalobi bezinganekwane bakhohliwe ukuthi ama cherry, ama-cherries, ama-berries, akhula emithini. Ngakho-ke, iqiniso lokuthi i-watermelon lihlala phansi alikho ubufakazi bokuthi "berry" yavelaphi.
I-Melon, njengaye, nayo iyisiko se- melon. Abalobi bezinganekwane bafakazela ukuthi uma i-watermelon iyinkibili, isihlobo sikazala kayise-melon. Kodwa, njengoba kuboniswe ngenhla, isithelo esinomzimba omnyama obomvu akuyona iberry, ngakho-ke, i-melon ayikwazi ukubhekwa njengezigaba zezitshalo zezitshalo.
Uma ubheka amaqabunga e-ithanga, i-zucchini, ikhukhamba, i-melon, ungabona ngokucacile ukufana kwazo namaqabunga e-melon. Ngakho-ke, ikhabe iyimifino, kanye nedatha yamasiko. Ngendlela, emaqabunga e-zucchini ama-zucchini afana nalawo amavononi - avulekile futhi aqoshiwe. Ngakho-ke, ngisho nangamakhabe amnandi, kodwa futhi nemifino. Futhi hhayi berry. Manje wonke umuntu, ecabanga ukuthi i-melon yisithelo noma imifino, angasho ukuthi lokhu kuyimifino.
Elementi ntuser.dat: onjani ifayela
Indodakazi ka-Anna Zavorotnyuk Stryukova - enye yamantombazane ethandwa kakhulu